Soo hel inta jeer ee FM aan la isticmaalin
Sida Loo Sameeyo Guddiga PCB
Waa maxay RF Filter
Qalabka baahinta FM-ka oo dhameystiran
DIY J anteenada tiirka
Taariikhda Raadiyaha ee Chicago: Sidee ayay u koraysaa ilaa 1900-meeyadii?
Tani waa dulmar ku saabsan taariikhda raadiyaha Chicago, waxaad wax ka baran doontaa taariikhda AM iyo FM ee Chicago ilaa 1900-meeyadii ilaa 1990-meeyadii. Booqo Hadda oo baro wax badan!
Sidee Loogu Xidhaa Dhowr Telefishan Hal Antenna?
Haddii aad gurigaaga ku haysato TV-yo badan, sida dadka badankiisu haystaan, waxaad horumarin kartaa isku xidhka dhawr Telefishin oo leh anteeno bannaanka oo isku mid ah. Isticmaalka qaybiyaha anteenada waxa ay u muuqataa in ay tahay hab aad u fudud oo lagu dhisayo xidhiidhka TV-yo badan oo leh hal anteeno.
by/Ku xidh dhawr Telefishin Hal anteeno
Disone Antenada 101 - Dhammaan welwelkaaga ayaa lagaga jawaabay hal aag
Ka fakar waxa kaa caawinaya inaad kormeerto taraafikada mareegaha hawada ama marinnada si guul leh? Waa Discone Anteenada. Waqtigan xaadirka ah, iyadoo la tixgelinayo inaad ka hooseyso, waxaan ku fekereynaa inaadan haysan wax tilmaam ah oo ku saabsan anteenadan si kastaba ha ahaatee.
Sida Loo Xidho Ulaha Dhulka ee Alxanka Ka Baxsan?
Maqaalkan, waxaan runtii ku tusi doonaa sida loo isticmaalo CADweld uni-shot si aad si xad dhaaf ah ugu xirto tiirarkaaga dhulka. Habkan isku xidhka fiilooyinka dhulka ee ulahaaga dhulka, ka fogaanaya miridhku, iyo sidoo kale isku xirka caabbinta sare ee ulaha dhulkaaga.
by/ Ulaha Dhulka Dammaanadda leh alxanka Exothermic
Sida Loo Dhiso Anteenada Rogista leh ee Isgaarsiinta Satelite-ka
Halkan waxa ah qorshooyinka dhismaha iyo dhismaha anteenada Turnstile oo aan u isticmaalo isgaadhsiinta hawada sare ee 2 mitir ee raadiyaha hiwaayadda.
by/ U dhis anteeno leexleexan oo loogu talagalay Isgaarsiinta Satelite-ka
U oggolow inay noqoto Raadiyaha CB, HAMS, Walkie talkies, ama GMRS, waa ikhtiyaarka ugu fiican ee taleefannada. Ma doonaysaa in aad ku xidhnaato qoyskaaga iyo asxaabtaada inta aanu xidhiidhiyuhu wax kharash ah kugu soo dalacin? Hagaag, kuwani waa waxyaabaha aad u baahan tahay inaad doorato.
Sidee Loo Dhisayaa Anteeno Toos ah oo 2 Meter ah?
Haddii anteenadii hore ee toosan ay lumisay radialkeeda sidoo kalena ay awoodi wayday inay garaacdo raadiyaha hiwaayadda badan ee ku wareegsan, waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad horumariso anteeno toosan oo ah 2 mitir 1/4 mawjadaha 146 mHz. band raadiyaha hiwaayadda. Oo waa kan hagaha adiga.
sida loo dhiso anteeno taagan
Sidee Loogu Dhisayaa Anteeno 2 Meter Ah Mobile Baaskiil?
Malaha dhibka ugu weyn ee qaadashada baaskiilka HT waa ka fikirida anteeno ku habboon baaskiilkaaga. Tani waa sababta oo ah baaskiilku ma bixiyo wax badan oo diyaarad dhulka ah. Waa kuwan qorshaha anteenada uu ku sharraxay qoraalka.
by/ U dhis anteeno Mobile Baaskiil
Sida Loo Dhiso Anteenada J-Pole ee Ham Band 70cm
Halkan waxaa ah anteeno J-cirif ah oo qiimo jaban leh oo aad u fudud in la dhiso. Marka la eego saacada, iyo sidoo kale ku saabsan $10 oo agab qiimo leh, waxaad heli kartaa anteeno j-cirif ah oo cajiib ah oo fulinaysa.
by/ U dhis anteeno J-pole ah ee Ham Radio
6 Qodob oo Muhiim ah oo ay tahay in la tixgeliyo Marka aad iibsanayso Xamuulka RF Dummy
Culayska dummy RF waa lama huraan haddii aad u baahan tahay inaad tijaabiso qalab kasta oo RF ah. Laakiin sida loo aqoonsado culeyska dummy RF ugu fiican adiga? FMUSER ayaa ku siin doonta 6 dhibcood oo kaa caawin doona dhimista kharashaadka.
by/ Qodobbada Iibsashada RF dummmy load
Dipole Antenna 101 - Dhammaan weydiimahaagii ayaa lagaga jawaabay hal meel
dipole waa anteeno sahlan oo ka kooban xadhig silig korantada ah oo kala badh loo kala qaybiyay sidoo kalena loo qaybiyay daaha. Anteenada raadiyaha noocaan ah waxay soo saari doontaa hirarka hirarka in ka badan laba jeer inta dhererkeedu yahay ugu badnaan waxqabadka.
Samee suunka lagu xidho Anteennada
Beryahan dambe, goobta shaqada, waxa aan fursad u helay (ama shuruud) in aan sameeyo suunka wejiga ee anteenada laba-geeska ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan la kulmay dhibaato. Waxaan khadka ka helay dhowr sano ka dib sida saxda ah ee aan tan u sameeyo muuqaalkayga anteenada qaarkood, maanta mareegaha waa la waayay! Markaa waxay noqotay inaan keligay u garto. Kadib saacado badan oo aan hubinayay qoraaladayda (aad u liidata), waan ogaaday.
Kaliya sida loo sameeyo NVIS Anteenada AKA Cloud Burner Anteenada Ka Faa'ideysiga Mag Mount
Qayb ka mid ah darawalnimada raadiyaha ham waa in la bixiyo isgaarsiinta waqtiyada xaaladaha degdegga ah. Maalinta soo socota ee Ohio NVIS Antenna Day, waxaan doortay inaan eego anteenooyinka NVIS. Anteenooyinka NVIS, oo sidoo kale loogu yeero Anteenooyinkooda Tooska ah ee Skywave ee dhow waxay leeyihiin xagal sare oo shucaac ah. Wax ku saabsan nidaamka 60 digrii, si toos ah ilaa 90 darajo. Si ka duwan calaamadaha UHF iyo VHF, kuwaas oo sida caadiga ah leh masaafo 50-mile ah oo leh anteeno yagi ah oo sare, iyo sidoo kale anteenada NVIS waxaa loo sameeyay isdhexgalka 75-- 500-mayl kala duwan. Marmar anteenada NVIS waxaa loo yaqaan "kuleyliyaha daruuriga ah" maadaama ay shucaac badan u marto anteenada caadiga ah.
6 Talooyin Iibka ugu Wanaagsan ee Gudbiyeyaasha TV-ga Dijitaalka ah ee Qiimaha jaban
Haddii aad rabto inaad bixiso adeegyada baahinta TV-ga, gudbiyaha TV-ga dhijitaalka ah ayaa kuu fiican adiga. Si kastaba ha ahaatee, waa qaali. Laakiin FMUSER ayaa ku siin doonta 6 tabo oo wax iibsiga ah si aad u yarayso kharashyadaada.
by/ Talooyin Iibka Gudbiyaha TV-ga Dijital ah
Samee Laftaada Qalfoofka Qalabkaaga oo leh Miiska Maqnaanshaha - LackRack
Dhawaan waxaan u baahday 19 ″ qalab qalabeed. Laakin aniga oo jaban, waxaan go'aansaday in aan dhiso mid. Markii aan baarayay internetka, waxaan helay waxa loo yaqaan LackRack, kaas oo adeegsada miiska la'aanta IKEA. Si kastaba ha ahaatee akhrinta dheeraadka ah ayaa shaaca ka qaaday dhowr waxyaalood oo aan u maleynayay inay ka maqan yihiin naqshaddii asalka ahayd ee LackRack.
Liiska Qalabka baahinta FM-ka ugu yar ee bilowgayaasha
Sidee bay kuwa bilowga ah ee RF u bilaabaan idaacada FM ugu yaraan? FMUSER ayaa ku siin doonta qalabka baahinta FM-ka ugu yar si aad u tixraacdo si loo dhimo kharashyadaada.
6 Talooyin Iibka ugu Fiican ee Gudbiyayaasha TV-ga VHF
Gudbiyaha TV-ga VHF ayaa weli si weyn looga isticmaalaa adduunka oo dhan. Si lagaaga caawiyo inaad soo qaadato gudbiyaha TV-ga ugu fiican ee VHF, waxaanu soo koobaynaa 6 talo oo iib ah oo ah kan ugu fiican.
Kaliya Sida Loogu Kordhiyo Aaladaha 19 Inj Shelf
Tan iyo ku dhawaad ​​​​dhammaan 19'' qalabyada qalabyada isticmaal 10-32 boolal oo ku dheji biraha dhinacooda, soo qaado laba ka mid ah oo ku dheji laba 10-32 loos ah furka, oo isku dheji. Dabadeed wax walba oo dhan ku dheji vise.
Sida loo sameeyo 20 ilaa 40 mitir oo toosan POTA
Waxaa jira wax xiiso leh oo ku saabsan samaynta kicinta POTA halkaas oo aad la soo gasho dhammaan qalabkaaga baakad oo aad sidoo kale kiciso beerta ku socota awoodda QRP.
Waa maxay VSWR - Tilmaamaha Fudud ee Bilowga RF
VSWR waxay muhiim u tahay hawl wadeenada RF, waxayna la xiriirtaa hufnaanta shaqada ee nidaamka RF. Ma fahantay VSWR? Waa kan hage sahlan adiga!
by/ Waa maxay VSWR
6 Talooyin Iibsashada FM-ka Wariyaha Anteenada
Anteeno gudbiye FM tayo sare leh ayaa ka dhigi karta idaacada FM-ka mid si wanaagsan u baahin karta waxayna kaa caawin kartaa kobcinta ganacsigaaga. FMUSER wuxuu kaa caawin karaa inaad doorato midka ugu fiican 6da talo ee wax iibsiga!
by/FM Gudiyaha Antenna Talooyin Iibka
Sida loo dhiso DIY 2 Meter J-pole anteeno
Haddii aad raadinayso qiimo jaban, iyo sidoo kale fudud si loo dhiso anteeno, anteenada J-pole waa mid aad u fiican! Wax ku saabsan saacada saacada, iyo sidoo kale ilaa $15 qiimihiisu badeecooyin ah, waxaad heli kartaa anteeno j-pole ah oo jiho dhan ah oo cajiib ah.
by/ DIY J anteenada tiirka
Waa maxay Qalabka Saldhigga Awood-hooseeya ee ay tahay inaad haysato?
Qalabka baahinta ee LPFM
Waa maxay baahinta iyo sida ay u shaqeyso? - FMUSER
Waa maxay baahinta iyo maxaad u danaynaysaa? Waa kan hagaha dhammaystiran ee ku saabsan baahinta FMUSER, oo ay ku jiraan waxa ay tahay iyo sida ay u shaqeyso. Sii wad sahaminta!
Hordhac Kooban oo ku saabsan Tignoolajiyada Soo saarista Warbaahineed - FMUSER
Waa maxay tignoolajiyada wax soo saarka baahinta iyo sababta ay tahay inaad u daryeesho? Waa kan macluumaadka dhamaystiran ee ku saabsan waxa ay tahay tignoolajiyada wax soo saarka baahinta iyo qaar ka mid ah noocyada aasaasiga ah. Sii wad sahaminta!
3-da Xaqiiqo ee ugu Sarreysa ee aad ka Ogtahay Gudbiyeyaasha Idaacada FM ka hor inta aan la iibsan
Sideen u dooran karaa gudbiyaha raadiyaha FM-ka ee sida ugu wanaagsan u buuxiya filashooyinka nafsadeyda? Waxaan aaminsanahay in dad badan ay ka fikireen su'aashan. Dhibaatadan waxaa lagu xallin karaa in la xasuusto qaar ka mid ah taxaddarrada muhiimka ah ka hor inta aan la iibsan! Blog-gani wuxuu si kooban u sharxi doonaa waxa uu sameeyo gudbiyaha FM, wuxuuna diiradda saari doonaa saddexda arrimood ee ugu muhiimsan ee u baahan in fiiro gaar ah loo yeesho ka hor inta aan la dooran gudbinta, kuwaas oo kala ah hubinta tayada, tirada inta jeer ee soo noqnoqda, badbaadada, si loo caawiyo macaamiisha doonaya inay iibsadaan FM-ga. si aad u samayso doorasho wanaagsan! Haddii blog-kani uu ku anfici karo, ha ilaawin inaad la wadaagto boggan!
Xaqiiqooyinka aasaasiga ah ee ku saabsan Gudbiyaha Raadiyaha FM | Baahinta FMUSER
Haddii aad ka shaqeyso dhinaca baahinta raadiyaha, waxaad u baahan tahay inaad fahanto gudbiyaha raadiyaha FM. Boggan ayaa kaa caawin doona inaad barato xaqiiqooyin aasaasi ah oo ku saabsan.
Hordhaca Anteenada Yagi | baahinta FMUSER
Waa maxay sababta anteenada Yagi ay caan u tahay? Aynu yeelano faham aasaasi ah oo ku saabsan sifooyinkeeda iyo adeegsigeeda. Aan sahamino!
by/ Hordhac Yagi Antenna
Buuxi Xirmada Qalabka Idaacadda ee ay tahay inaad u haysato baahinta FM-ka
Immisa nooc oo qalab baahinta ah ayaa ku jira idaacad dhammaystiran, iyo sida ay u wada shaqeeyaan qalabkan baahinta. Halkee laga iibsan karaa qalabkaas warbaahineed ee xirfadlayaasha ah? Boggan ayaa ka jawaabi doona su'aalahan.
by/ Qalabka baahinta FM-ka oo dhameystiran
Waa maxay Gudbiyaha FM-ta ugu Fiican ee Awoodda Sare ee Xarunta Raadiyaha?
Waa maxay gudbiyaha FM ee awooda sare leh? Maxay tahay tayada ay leedahay? Iyo sida loo doorto gudbiyaha FM-ka ugu awoodda badan, sida 5kw FM? Dhammaantood waxay ku jiraan boggan.
Ku-gudbiye FM ah oo awood sare leh oo loogu talagalay Xarunta Raadiyaha
Maxaynu uga baahanahay FM-ta baahinta Raadiyaha?
Maalmahan, hababka wax-ka-beddelka ee aadka loo isticmaalo baahinta raadiyaha waa AM iyo FM. Taariikhda, baahinta AM waxay soo muuqatay tobanaan sano ka hor baahinta FM-ta, laakiin ugu dambeyntii, dadku waxay qaataan FM baahinta in ka badan baahinta raadiyaha. Inkasta oo AM ay weli tahay mid aad muhiim u ah, si yar ayaa loo isticmaali jiray. Maxaynu uga baahanahay FM-ta baahinta raadiyaha? Maqaalkani waxa uu su'aashan kaga jawaabi doonaa isbarbardhigga farqiga u dhexeeya AM iyo FM. Aan bilowno!
by/ Waa maxay sababta FM-ta u khusayso
Sidee buu u shaqeeyaa Idaacadda Raadiyaha FM-ta?
Idaacadda FM-ta ayaa jabisay nolosha dad badan waana qaabka loogu isticmaalka badan yahay baahinta. Waxay baahiyaan dhammaan noocyada kala duwan ee barnaamijyada codka ah ee idaacadaha si ay dadka ugu soo bandhigaan farxadda nolosha. Si kastaba ha ahaatee, ma taqaanaa sida idaacaddu u duubto codadkaas oo ay barnaamijka uga dhigto mid ka dhawaqaya raadiyaha? Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa jawaabta iyada oo loo marayo.
by/ Sida ay u shaqeyso Idaacad FM ah
Horudhaca Xiriirinta Gudbinta Istuudiye (STL)
Iskuxirka Gudbinta Studio (Studio Transmitter Link) waa tignoolajiyada gudbinta maqalka ee wireless-ka ee u gaarka ah warshadaha baahinta. Isku xirka gudbiyaha istuudiyaha, ama istuudiyaha isku xirka gudbinta, ama isku xirka iskuxirka gudbinta istuudiyaha, waxaa loo qaybin karaa isku xirka gudbiyaha istuudiyaha dhijitaalka ah iyo isku xirka gudbiyaha istuudiyaha analooga ah. Qalabka isku xirka istuudiyaha waxaa loo qaybin karaa qalab ay ka mid yihiin gudbiyaha isku xirka istuudiyaha, istuudiyaha xiriiriyaha gudbinta, iyo istuudiyaha isku xirka anteenada, tani way ka duwan tahay noocyada kala duwan ee isku xirka gudbinta istuudiyaha. Fahamka nooca iyo mabda'a shaqada ee isku xirka gudbiyaha istuudiyaha ayaa si wax ku ool ah u dhimi kara kharashyada wax iibsiga
by/ Hordhac STL
DIY an FM Radio Dipole Antenna | baahinta FMUSER
Anteenada FM dipole waa anteenada nooca ugu fudud uguna ballaaran, sidaa darteed way u fududahay qof kasta inuu sameeyo mid u gaar ah, kaas oo kaliya u baahan qalab fudud. anteenada DIY FM dipole waa doorasho la taaban karo oo jaban haddii raadiyahaagu u baahan yahay anteeno ku meel gaar ah. Haddaba sidee loo DIY anteeno dipole FM ah? Maqaalka ayaa kuu sheegi doona.
Analog & Digital TV Gudbiyaha | Qeexitaan & Farqiga
Dhanka baahinta raadiyaha, waxaad arki kartaa in aalado badan ay adeegsadaan anteenooyinka dipole. Ma aha oo kaliya anteenada baahinta raadiyaha ee loogu isticmaalka badan yahay, laakiin sidoo kale nooca ugu fudud ee anteenada. Waxa keli loo isticmaali karaa ama lagu dari karaa anteenooyinka FM-yada kale si loo sameeyo hannaan anteeno ah.
by/ Hordhac Gudbiyaha TV-ga
Sida loo Helo Soo noqnoqoshada aan la isticmaalin ee FM-ta Wariyeyaasha?
Gudbiyeyaasha raadiyaha FM waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud uguna jaban ee lagu dhagaysto muusigga mobaylka. Laakiin rookie, waxa laga yaabaa inay yara adag tahay in la helo inta jeer ee ka madax bannaan faragelinta. Haddii aad dhibayso inaad hesho soo noqnoqoshada FM-ka ee aan la isticmaalin, qaybsigan ayaa adiga ku anfici doona.
by/ Soo hel inta jeer ee FM aan la adeegsan
Horudhac u Samaynta Calaamadaha Dijital ah ee DSP | FMUSER BADBAADINTA
Adeegsiga tignoolajiyada DSP ee gudaha Gudbiyeyaasha raadiyaha FM wax cusub maaha. Waxaad ku arki kartaa in badan gudbiyaha raadiyaha FM-ka dhijitaalka ah. Haddaba waa maxay nooca tignoolajiyada? Qaybtani waxay u soo bandhigi doontaa DSP saddex dhinac: mabda'a shaqada ee DSP, ka kooban nidaamka DSP, iyo shaqada DSP.
by/DSP - Habaynta Signalka Dijital ah
Qalab noocee ah ayaan uga baahanahay Idaacad FM?
Ma waxaad dhisaysaa idaacad FM oo aad la yaabban tahay waxa aad iibsanayso? Qoraalkani waa adiga oo keliya. Kani waa hage dhammaystiran oo ku saabsan xulashada qalabka baahinta FM-ta iyo qalabka raadiyaha FM-ta. Inta aadan galin qoto dheer, waxaan rabnaa inaan ku siinno aragtida guud ee qalabka baahinta raadiyaha ee loo baahan yahay si loo bilaabo idaacad.
by/ Qalab loogu talagalay Xarunta Raadiyaha
Iskuxirka Gudbinta Studio (STL Link) | Waa maxay iyo sida ay u shaqeyso
Blog-gani wuxuu kuu keeni doonaa sida isku xirka istuudiyaha u shaqeeyo, oo ay ku jiraan qeexida, noocyada, iyo qalabka la xiriira nidaamyada isku xirka STL.
by/ Ku saabsan STL Link
Intee in le'eg ayuu gudbi karaa baahinta FM? - Cutubka 1-aad - Sida ay u shaqeyso baahinta FM-ta
Fogaanta daboolida gudbiyaasha baahinta ee leh awood kala duwan way kala duwan tahay. Guud ahaan marka loo eego, awoodda gudbiyaha ee weyn, ayaa sii ballaaranaysa daboolidiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira arrimo badan oo ka hor istaagaya gudbiyaha inuu gaaro fogaanta daboolista aragtida, Qeybtaani waxay dabooli doontaa sida baahinta FM-ta ay ugu shaqeyso awood kala duwan iyo arrimaha caqabada ku ah baahintooda caadiga ah.
by/ Sida ay u shaqeyso baahinta FM-ta
Liiska Qalab Raadiyaha Raadiyaha oo Dhameystiran ( Sawiro leh)
Qolka Rack Station ee Raadiyaha ama Qolka Injineerinka (sidoo kale loo yaqaano Central Apparatus Room) had iyo jeer waa qaybta ugu muhiimsan ee nidaamka idaacadaha oo dhan, qalab badan oo warbaahineed oo badan ayaa la dhigayaa qolka rackka sida kuwa qaata dayax-gacmeedka, gudbiyaasha FM, iyo maqalka. Processor, iwm, Haddii aad rabto in aad dhisto idaacad cusub oo aadan aqoon sida loo doorto qalabka asaasiga ah ee idaacadaha, markaa liiska qalabkan ee qolka rakadaha raadiyaha caadiga ah ayaa ku caawin kara si aad u wanaagsan.
by/ Liiska Qalabka Xarunta Raadiyaha
Ogeysiisyada Kahor Iibsashada Gudbiye FM
Haddii aad tahay rookie raadinaya qalabka baahinta FM-ta ee tayada leh laakiin aanad hubin sida loo doorto mid, waxa fiicnaan lahayd inaad aragto casharkan wax iibsiga ka hor inta aanad qaadan go'aanka ugu dambeeya.
Sidee Loo Sameeyaa Boorad Wareeg oo Daabacan? | Habka Waxsoosaarka PCB
PCB, oo sidoo kale loo yaqaan sabuurada wareegga daabacan, waxay ka samaysan tahay walxo aan fiicneyn oo kala duwan oo loogu talagalay taageerada jireed iyo isku xirka qaybaha godadka dusha sare ku xiran. Laakiin waa maxay shaqada guddiga wareegga daabacan? Sidee loo sameeyaa looxa wareegyada daabacan? Akhri nuxurka soo socda si aad u hesho macluumaad badan oo faa'iido leh.
Sida loo Sameeyo Guddi PCB ah